Gaarisa | News From Somalia
Category Archives: Gaarisa
SHIRIB:-Waxaan jeclaaday jubaland jiilaal abaarna joogi maayo!
Posted on April 29, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Aqooyahan gabyaa ah ayaa cabiray xaalada Jubbooyinka iyo ismarin waaga ka taagan Kismaayo.
Hadaba Aqris wacan Shiribka.
Intaad ujeeday Jaamacoow jarmaadayaa adoo jilbeysan
Waxaan jeclaaday Jubaland jiilaal abaarna joogi maayo
Minaad jeclaatay Jubaland walleen majoogo Jeeshki Kenyo
Intaan lajiifo oon la joogo jidkaan tusaa jikaari maayo
Jufo adeeg ku jeenan doono ar maad kajoogtid waa jabkaahe
Maheey Jahiir ya Shiikh jawaanba jago rabaan an xeyga joojay
Jabhad abuur ya jaad cunoow jinkood madhaaftid Jaamacoow
Rag woow jabaa woxoow jantee waxaan jafaa jidgooyadeyda
Ma ninkii jafaaliyaa jid yeesha janan ya tuugba waa jiraane ?
Tobanki jeese reer januuni ninkii dhexjooga yoow jawaabi
JAC YA KHEYR MID UUN KUJIIFO JEEGO GOYN NA WAA JIRTAAHE
Jaljaleecsiyaan jalbeeb maraa asaan jucsaa muggaan ujeedo
Xidhibaan Cabduqaadir Sandheere “ Arrinta Kismaayo Waxay Dabadda la Gashey Norway”
Posted on April 14, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Kulan ay isugu Yimaadeen Qaar ka mid Xildhibaanada Baarlamaanka Dowladda Federaalka
ayaa waxaa si weyn looga doodey Arimaha Kismayo Haatan ka taagan iyo Galaangal ay
Dowlada Noway ku leedhaya arrimha Maamul u sameynta Gobolada Jubbooyinka oo haatan uu
ka taagan yahay Muran aad u Xoogan kaasoo ku aadan qaabka loo wajahayo Maamul loo
Kulankaas Markuu soo Idlaadey Waxaa Saxaafada la Hadley Xildhibaan Cabduqaadir
Aadan Sandheere oo yiri “Markii Maamulada laga sameynayey Soomaaliland ,Pundland ee hatan
Jira Muddo Dheer ,Norway , Faransiis , Kenya iyo Itoobiya Ma joogin inagaa ka marqaati ah
Cid Fargeliseyna ma jirin , Cid Dhaqaale ku Bixisey ma jirin iyagoo is Abaabuley oo Maamul
sameystey Mudadaas ay jireen kuwa Dastuurka u sameynayey Qaar baa ila Degenaa Boston
waad aragtaan halka ay marayaan , haddii qabiil laga hadlayana kuwa aan soo sheegey baa
qabiil ku Dhisan marka Maamuladaas lama taaban oo lagama hadal ee Aniga maxaa na loo
haystaa ayaa dadka qaarkii ay ka soo yeertey , adinka waxaa la idiin haystaa dadkii Gobolka
oo aan u dhameyn waxa hadda la wado, Gaalaa wadataan,iyo Badda halkaa ku taal oo la og
yahay in Laba goor Baarlamaanka la horgeeyey oo aan diidney , waan ognahay in Kismaayo
la riixayo” ayuu yiri Sandheere.
Waxaa uu sii raaciyey“Meel baa hadda Jirta oo arrinta Badda lagu soo qaadey oo ay Fadhiyaan
dad Somaaliyeed , waxaa Xaqiiqo ah in arrinta Kismaayo ay Dabada la gashey Norway ,
aniga Af Dowladeed kuma hadlayo waxaan ahay Xildhibaan Dowladda Norway waxay
Shirisey dadka Soomaaliyeed ee haysta Dhalashada Wadankaas sidoo kale Wasiirka
arrimha Gudaha waxaa uu Shiriyey Soomaali fara badan oo ku nool Wadankaas oo
aan is aqoon , waxaa la yiri “Norwegian baa tihiin, Nasiib badan baa leedihiin ,
Soomaalina waa tihiin Dowlada Norway Dan weyn bay ka leedahay Soomaaliya
arrintaa baa la rabaa in aad ka noqotaan Hormuud , waxaa idiin ku yeerney in
aad Shaqadaas u istaagtaan oo wax nala qabataan, sidaa darteed Dadka Soomaaliyeed
ee Qoxootiga ku ah Wadankaas qofba mar buu tagey waxay ahayeen Dadka loo
yeerey dad Professional” wuxuu intaa ku darey Xidhibaan Sandheere
“Waxaa si cad loo yiri waa in aad taageertaan Jubbaland ,waayo waxaa tihiin Norwegian,
markii horana Soomaali baa tihiin u fiirsada arrinta Soomaali iyo Norway ma aha , waxaan
nahay wadan baaba’san oo u u baahan in la Maal gasho soo dhawaada oo noo soo
Saara Shidaalka, Sheekadu arrinta sidaa ma aha , danta Norway waa Jubbaland ,
Buuga yarka ee Federaalka iyo Dastuurka Norway Lacag badan baa uga baxdey
Qodobada qaar iyagaa qorey sida aan is leeyhaya
W/D Amiin Yuusuf Khasaaro E-Mail amiinkhasaaro@hotmail.co.uk
KISMAAYO:-Axmed Madoobe oo laga diiday in hubka laga mamnuuco gudaha Kismaayo.
Dagaal Ooge Axmed Madoobeayaa soo saaray Digreeto uu ku mamnuucayo in hub lagu dhex qaato Gudaha Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubbada Hoose,waxaana diiday maleeshiyo beeleedka ku sugan gudaha Kismaayo.
“hubka waa lagala wareegayaa tilaabana waa laga qaadayaa qofkii la arkaa isagoo qori ama hub kale ku dhex sita Kismaayo”ayaa lagu yiri wareegtada kasoo baxday Gudoomiyaha KMG Kismaayo ee Axmed Madoobe.
Wareegtada kasoo baxday Axmed Madoobe ayaa durbaba waxaa gaashaaanka ku dhuftay Maleeshiyaadka ku dagaalamay Magaca Dowladda Xasan Maxamuud Culusoow.
Lama oga sida ay u dhaqan gali doonto wareegtada kasoo baxday Axmed oo usharaxan Maamul Kenya ka dhiseeeyo Kismaayo.
Kismaayo ayaa u eg ama ah magaalo dagaal ma horta ah,waana sida lagu yaqaan magaalo xeebeedkaas Somali dhan wada sheegato laakin maalmahan dhib ka jiro.
DHAGEYSO:-Xildhibaan Cabdirashiid Xidig”Dastuurka Puntland iyo kan Jubba Land wax badan bay wadaagaan”
Xildhibaano badan oo gaashaanka kudhuftay Siyaasada Dowladda ee ku aadan shirka Kismaayo kasocda ayaa gaaray Magaalada Kismaayo ee Gobalka Jubada Hoose.
Xildhibaanadaasi waxaa hogaaminayay Cabdirashiid Maxamed Xidig kuwaasi oo ka anbabaxay Magaalada Muqdisho.
“Waan taageersanahay Dastuurka Dowlad gobaleedka Jubbaland”ayuu yiri Xildhibaan Xidig.
“Dastuurka Dowladda marka laqorayay ilaa 50 dastuur ayaa la isku keenay,waxaan u arkaa in wanaag ay tahay haddii dastuur Soomaali leedahay marka wax badan oo aan lasoo koobi karin bay wadaagaan dastuurka Puntland iyo kan Jubbaland”ayuu yiri Xildhibaan Xidig.
Xidig ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay qorshaha Kenya ay kudoonayso inay dhisto Maamul isku xira Gaarisa ilaa Kismaayo.
Xassan Gurguurte iyo Saacid Shirdoon waa ku ceeboobeen, waatii Xassan Gurguurte meeshii uu tago Qalka inta kala qaado uu ku hayey Caalamka ayaa Na’ Aqoonsaday, soo Ilaahay ma qadarin in Ciidanka Kenya ee xoogga Soomaaliya ku haysta in ay Amarka ka qaataan Axmed Madoobe halka Saacid Shirdoon iyo Wasiiradii Xassan Gurguurtana ay kasoo cayriyaan Kismaayo, haddii Caalam Aqoonsan yahay xattaa muxuu u ceshan waayey Xildhibaanada Kismaayo tagay, Yaa diray Xildhibaanada?.
Siyaasaddii Soomaaliya waa looga adkaaday Xassan Gurguurte iyo Saacid Shirdoon, Xildhibaano aanan cidna shaqo u dirsan ayaa leh Dowladda iyo waxaan hishiisiinaynaa Axmed Madoobe, Ninka sidaas leh waa C/rashiid Xidig oo waligiis Axmed Madoobe taageersanaa Xassan Gurguurte iyo Saacid Shirdoonna Warbaahinta ka weerarayey.
Dhagayso Wareysiga aynu layeelanay Xidig.
Muxuu Hadda Kahor Yiri C/rashiid Xidig?.
Waxaad hoos kadhagaysan doontaan Waraysi C/rashiid Xidig laga qaaday oo aan hadda kahor daabacnay, waa Ninka Maantay leh Axmed Madoobe oo dhinac ah iyo Xassan Gurguurte iyo Saacid oo dhinaca kale ah, ayaan hishiisiinayaa, Dhagayso sida uu Professor Dalxa u leeyahay waa Beenlow, Xildhibaanada kalana uu u weerarayo, wuxuu leeyahay C/rashiid Xididg “Maa, Magaalada Baledweyne laga hadlo maxaa Kismaayo looga hadlayaa?”, Baarlamaanku waa gaas waa dirireen hadda waxaa soo socda dagaalkii Labaad ee Baarlamaan Ri’dada ah ay Kuraas Madaxa iskala dhici lahaayeen. Waa in ay Xildhibaanada Xassan Gurguurte taageersan ee Beelaha Hawiye ay Madaxa Bud kala dhacaan markii Xildhibaanada C/rashiid Xidig ay Muqdisho ku soo laabtaan.
Dhagayso Waraysi hore C/rashiid Xidig BBC MP3 Halkaan Riix Ama Guji
Faroole iyo Ina Ileey oo Kismaayo ku sii jeeda iyo Xasan Gurguurte oo Xamar xasili waayay!!
Posted on April 2, 2013 by Voice Of Somalia Aside
Magaalada Kismaayo waxaa gaaray Cumar C/rashiid Cali Sharmaake Raisalwasaarihii Xukuumaddii Sharif Sheekh Axmed iyo Xildhibaano isku beel kore yihiin . Xassan Gurguurte dagaal Siyaasadaysan la galay wuxuuna ku keeni doonaa inow Banaadir ka dhamaan waayo.
1- Ina Ilay,
4- Axmed Madoobe,
5- Afhayeenka Kenya Faarax Macalin,
6- C/naasir Seeraar
7- Wasiirka Gaashaandhigga Kenya Maxamed Xaaji Yuusuf,
8- Al-Ictisaam Daarood ee Kenya jooga,
Soomaaliya waa la kala boobayaa, Soomaali xattaa haddii ay 4.5 la yiri waa iska daayeen si kale ayaa loo qorayaa, Faroole waatii uu yiri, Xisbiyo ayaan samaynayaa, hadda Puntland waxaa ka socda Qabiilkasta in uu samaysanayo Xisbi, marka waxaa dhacaysa Qabiilkasta oo Soomaaliya in uu Dowlad ku dhawaaqo oo gaalo soo ka xaysto.
Xassan Gurguurte iyo Saacid Shirdoon waa horay ku fashilmeen Siyaasaddii ay Soomaaliya ku hogaamin lahaayeen, waa kaas Saacid Shirdoon xattaa Odayaashii Gedo soo cayriyeen oo dheheen maxaad noo haysaa oo badal ah, aan ka harnee Axmed Madoobe iyo C/naasir Seeraar?, Soomaaliya waxaa ka socda in Qabiilada waa weyn ay ku habsadaan Qabiilada kale, waxaa dhaqaalaha iyo gaalada wata waa Qabiilada sheegta in ay ka tira badan yihiin Qabiilada kale.
Waxaa Soomaaliya Reer Galbeedku kadhigayaan, Gobolo Qabiilo ka taliyaan, Imaarado yar yar oo Kenya iyo Itoobiya hoos taga oo Qabiillo haystaan. Markaas ayaa Xassan Gurguurte iyo Saacid Shirdoon waxay u qabaan in Caalamku aqoonsan yahay, maxay u joojin waayeen Shirka Kismaayo?, maxaa Ciidamada Kenya oga amar qaadanayaan Axmed Madoobe iyo C/naasir Seeraar oo Saacid Shirdoon iyo Xassan Gurguurte oga amar qaadan waayeen oo Shirka Kismaayo u joojin waayeen?, Waayo Wasiirka Gaashaandhigga Kenya?.
Waa iska caddahay in aysan Soomaaliya ka talin Xassan Gurguurte iyo Saacid Shirdoon, Qabiilada Soomaaliya waxaa hogaanka u haya Hay’ado gaalaa oo Nairobi jooga, kuwaas oo leh dano gaara. Dastuurka Jubbaland la yiri waa loo dajinayaa waxaa Puntland kasoo qaaday Hay’ad Wadanka Norway laga leeyahay, Wadanka Norway ayaa doonaya in Shirkadahoodu ay Shidaal iyo Macdan kala baxaan Dhulka Soomaaliyeed oo Kenya ayaa deegaanka Fax’faxdhuun iyo deegaan kale ka qodanaysa Shidaal.
Dhagayso Ninka sheegtay Guddoomiyaha Shirka Kismaayo Macalin Maxamed Ibraahim MP3 Halkaan Riix Ama Guji
Dhagayso Xildhibaan leh Dastuurka Anigaa Akhriyey Sharci ayaad ku shiraysan cidna sugi mayno ee shirku waa sharci MP3 Halkaan Riix Ama Guji
Dhagayso Cumar C/rashid oo Qabyaalad Shirka Kismaayo u tagay MP3 Halkaan Riix Ama Guji
KISMAAYO:-Xaaladda Kismaayo oo kacsan iyo Isgaarsiinta m oo hawada laga saaray.
Posted on March 10, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbooyinka balse hadda gacanta ugu jirta ciidamada gumaysiga Kenya iyo maleeshiyaadka Dalyaqaanka u ah ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe ayaa laga soo sheegaya xaalad kacsanaan ah oo aad u saraysa iyadoona isgaarsiinta magaaladaasi ay tahay mid go`an xilligan.
Xoogag beeleed hubeysan oo isbuucyo ka hor Kismaayo kula dagaalamay Axmed Madoobe ayaa helay gurmad ciidan kuwaasi oo hadda ah awood la loolami karta maleeshiyaadka Madoobe.
DHAGEYSO-WARBIXINTA:-Shirka Kismaayo astaanta gumaysiga Kenya iyo fashilka dowladda federaalka.
Posted on March 3, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Shirka kafurmay Magaalada Kismaayo ee Kenya wadato waxa uu muujiyay Heerka Gumaysi Kenya ee Juboooyinka iyo Dowladda Federaakla Xasan Sheekh inay marti katahay Dalka ay sheegatay inay Dowladd utahay.
Kenya ayaa Dhagaha kafureysatay Hadallo Jilicsan oo Laga sii fakaray Dowladduna kudalbatay inaysan marti kanoqon Kismaayo ee lagu soo wareejiyo Hogaanka Shirka looga tashanayo Dowladda Gobaleed loogu magacdaray Jubbaland.
Dagaal oogaha Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo Kenya ay wadato ayaa sicad udiiday in Dowladda Federaalka looga Danbeeyo aayaha shirka kafurmayo Kismaayo iyadoona fashil uu kusoo dhamaaday kulan dhex maray Axmed Madoobe iyo wasiiro mar sii horeysay tagay Kismaayo.
Kenya oo adeegsanaysa Siyaasad Gumaysi oo Casri ah Qiimeyn iyo soo dhaweyn uma hayso Dowladda oo Waxaad kadareemaysa soo dhaween la’aanta Wasiiro todobo ruux gaaraya oo Raisulwasaare Saacid udiray Kismaayo.
Dowladda Kenya Hadduu uhirgalo Qorshaha Maamul usamaynta Jubooyinka iyo Gedo maxaa kahortaagan inay si fudud ula baxdo qeyraadka dhex Ceegaaga Jubooyinka Gaar ahaan Xeebta kuteedsan Kismaayo oo Shidaal ay kabaareyso.
Maamul Gobaleedyada ladhisayo waxaa Muuqanaya sida ay kusocdaan inaysan wax talo ah kulahayn dowladda.
Dowladdaha Faragalinta kuhaya Dalka Soomaaliya sida Itoobiya iyo Kenya Xiligaan waxaa ay wadaan inay Maamul Gobaleedyo kudhistaan Dad Soomaali ah kuwaasi oo haatan shirar Maamul Gobaleedyada lagu dhisayo uu kaga furmay Kismaayo.
Halka Dowladdu iyada isagu yeeri lahayd hogaana unoqon lahayd Shirka Kismaayo iyada ayaa loo yeeray laguna Amray inay kasoo qeybgasho Shirka Kismaayo kafurmay sida uu shir jaraaid kismaayo uu kuqabtay kasheegay Axmed Madoobe oo Musharax u ah qabashada Maamulka Jubba land.
Raisulwasaaraha Xukuumada Federaalka ayaa madax xanuun kaqaaday Shirka kafurmay Kismaayo.
“Dowladdu iyada ayaa wax isagu yeeri karta, Dadkuna doorkoodu wuu cadyahay,sadax door oo dowladu lahayd shirku laguma hayo,marin darada ma ogolin loomana dulqaadan karo”ayuu yiri Saacid.
Guuldarada iyo fashilka siyaasadeed kudulhabsaday Xukuumada Saacid waxaa sii xoojiyay rag xildhibaano ah oo iyagoo dhagaha fareysto inaysan kaqaybgalin shirka Kismaayo kaduulay Magaalada Muqdisho iyo Kenya kuwaasi oo Haatan kusugan Madasha Shirkana warbaahintana usheegay inay ayidsanyihiin waxa kasocda Kismaayo.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo Saxaafada kula hadlay Kismaayo ayaa kudhawaaqay Dowladda inay joogto oo ay kaqaybgalayaan shirka iyagoo dowladda kamid ah.
Raisulwasaare Saacid ayaa muujiyay in Tixgalin uu kawaayay horjoogaha ugu sareeya raga Kenya ay wadato ee kusoo wehliyay Duulaanka ay kusoo qaaday Magaalada Kismaayo.
Saacid oo dalbaday in iyaga loo yimaado amaba isaga uu tago Kismaayo ayaa gaashaanka lagu dhuftay Taasi oo muujinaysa in Marti kayihiin kismaayo xaalkuna sidaan hadduu sii ahaado kismaayo lagu gali doono kibaandhaha ama sharciga dal kugalka Kenya.
Rag badan oo aqooyahano ayaa horay kaga digay qatarta kadhalan karta Federaalismka ay kushaqaynayso Dowladda oo loo marin habaabiyay qaab aysan raali ka ahayn.
Urur Gobaleed Igad oo ay ugu tun weynyihiin Dowladda Itoobiya ayaa soo saaray war umuuqda mid jawaab cad u ahay Kuna wajahan Dowladda Saacid.
Warsaxaafadeedka Igad ayaa Dowladda Looga Dalbaday Ciidamo Nabad sugid ah inay kudaadgureyso Goobaha ay kabaxaan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab islamarkaana Gaaraan Askarta Shisheeyaha soo duulay.
Dowladda waa inay taageertaa baahida shacabka ee ku aadan Maamul usamaynta Gobalada Dalka.
“IGAD waxa ay sibuuxda usoo dhaweynaysa Gobalada Midoobaya oo samaysanaya Maamul Gobaleed”ayaa laraaciyay Warka kasoo baxay Dowladdaha Itoobiya iyo Kenya oo iyagoo huwan magaca IGAD Shir Maamulo lagu dhisayo kafuray Kismaayo iyo Baydhabo.
“Dowladda Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa sidii ay utaageeri lahayd shirka kafurmay Kismaayo ee lagu dhisayo Jubbaland”ayaa lasii raaciyay qoraalka kasoo baxay Urur Gobaleedka IGAD.
Sikastaba ha ahaatee shirka Kismaayo kafurmay waxa uu muujiyay Hab Maamul iyo Jirista Dowladda oo iyadu horay kufaantay inaysan lamid ahayn Dowladihii KMG ee Dalka Soo maray Mareykankana Aqoonsi buuxa uu siiyay.
Haddiiba ay dhacdo waxaa fadeexad cad sii ahaan doonto in Madaxda Dowladda Lagu dhex Arko Shirka Kismaayo kasocda oo aan lagala tashan Kenyana wadato.